जसपामा कार्यकारिणी समिति दोब्बर बनाउन दबाब
As of Mon, 10 Aug, 2020 11:10
ACLBSL 685.00 ( 100 ) ( -7 ) ADBL 416.00 ( 350 ) (4) AIL 500.00 ( 22615 ) ( 33 ) AKJCL 51.00 ( 61 ) ( -2 ) ALBSL 700.00 ( 100 ) (0) BFC 96.00 ( 304 ) ( -6 ) BOKL 224.00 ( 200 ) (0) BPCL 355.00 ( 100 ) (4) CBBL 1,070.00 ( 40 ) ( 20 ) CBL 142.00 ( 170 ) ( -1 ) CCBL 179.00 ( 50 ) (2) DDBL 844.00 ( 150 ) ( 11 ) DHPL 55.00 ( 10 ) (2) EBL 718.00 ( 11 ) (0) EIC 448.00 ( 6010 ) ( 40 ) GBIME 258.00 ( 1141 ) ( 8 ) GFCL 152.00 ( 100 ) (2) GLBSL 921.00 ( 1563 ) ( -3 ) HDL 1,703.00 ( 650 ) ( 33 ) HGI 412.00 ( 60 ) ( 8 ) HURJA 92.00 ( 20 ) ( -1 ) IGI 448.00 ( 234 ) ( 20 ) ILBS 691.00 ( 3700 ) ( -12 ) JBBL 170.00 ( 36 ) (0) KBL 194.00 ( 510 ) (3) KMCDB 767.00 ( 10 ) ( -15 ) LBBL 190.00 ( 100 ) (3) LGIL 451.00 ( 100 ) ( 8 ) MEGA 224.00 ( 418 ) (2) MFIL 294.00 ( 27580 ) (9) NABIL 840.00 ( 30 ) ( 27 ) NBL 270.00 ( 20532 ) (7) NFS 193.00 ( 70 ) ( -3 ) NHPC 53.00 ( 1020 ) ( 1 ) NIB 445.00 ( 112 ) (0) NIBSF1 11.11 ( 100 ) ( 0.52 ) NICA 561.00 ( 125 ) ( 8 ) NICGF 10.16 ( 2000 ) (0) NICL 445.00 ( 100 ) ( 8 ) NICLBSL 758.00 ( 600 ) (2) NIL 632.00 ( 1100 ) ( 12 ) NLBBL 733.00 ( 10 ) ( 34 ) NLG 635.00 ( 10 ) ( 12 ) NLIC 1,360.00 ( 685 ) ( 17 ) NMB 417.00 ( 675 ) (6) NRIC 575.00 ( 1210 ) (3) PCBL 268.00 ( 10 ) (5) PIC 633.00 ( 500 ) ( 8 ) PLIC 550.00 ( 200 ) ( 10 ) PPCL 113.00 ( 50 ) ( -2 ) PRIN 492.00 ( 381 ) ( 14 ) PRVU 236.00 ( 476 ) (3) RHPL 144.00 ( 90 ) ( -2 ) RMDC 742.00 ( 100 ) ( 14 ) RSDC 484.00 ( 200 ) (9) SABSL 737.00 ( 52 ) ( 20 ) SANIMA 340.00 (7) (0) SBL 295.00 ( 1045 ) (0) SDESI 828.00 ( 12 ) ( 16 ) SEF 9.80 ( 400 ) ( 0.06 ) SICL 1,224.00 ( 297 ) ( 24 ) SJCL 134.00 ( 20 ) ( -2 ) SLBSL 820.00 ( 10 ) (6) SPARS 820.00 ( 11 ) ( -10 ) UIC 379.00 ( 679 ) ( 14 ) UPPER 222.00 ( 192 ) ( -2 )
जनता समाजवादी पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमाथि कार्यकारिणी समितिलाई दोब्बर बनाउन दबाब बढिरहेको छ । संघीय परिषद् अध्यक्षको चयन गरी पार्टीका विभिन्न संरचनालाई पूरा गर्नुपर्ने कार्यमा यो दबाबले समस्या निम्त्याइदिएको छ ।
महन्थ ठाकुरलाई एक नम्बर कार्यकारी अध्यक्ष र दुई नम्बर उपेन्द्र यादवलाई बनाएर पार्टी एकीकरणको प्रमाणपत्र निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त गरेको जसपामा कार्यकारिणी समितिको विवाद बढ्न थालेको हो ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका ६ जना तत्कालिन अध्यक्ष मण्डलका ४ जना सदस्यहरूको असन्तुष्टिले समस्या उत्पन्न भएको हो । कार्यकारिणी समितिलाई दोब्बर बनाएर यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने स्थिति पार्टीभित्र बनेको छ । यसबाट पार्टीका अध्यक्ष ठाकुरलाई समस्या बढेको बताइएको छ ।
यस विषयबारे जानकार एक नेताका अनुसार तत्कालीन राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूले दुई जना नेता ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई कार्यकारिणी समितिका नेता छान्ने जिम्मेवारी दिएका थिए । दुवै जनाले पुराना आफ्ना पार्टीका ९÷९ जना राखेर बाँकी अध्यक्षहरूलाई बेवास्ता गरे । यी दुई जनाले अन्य चार जनाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न उनीहरूलाई नसोधी एकलौटी गरेकाले उनीहरूको असन्तुष्टि बढेको हो ।
राजकिशोर यादव निकट एक नेताले भने, “नेताहरूले हातमा डण्डा थमाइदिँदा हवल्दारी शैलीको व्यवहार गर्नु उचित होइन ।”
असन्तुष्ट नेताहरू महेन्द्र राय यादव, शरतसिंह भण्डारी, अनिल कुमार झा र राजकिशोर यादवको तर्फबाट यो समस्याको समाधान कार्यकारिणी समितिको विस्तार गरी समाधान गर्नुपर्ने दबाब परेको उनले जनाए ।
राजपाका नेताहरूमा समस्या बढिरहेका बेला उपेन्द्र यादव समूहले तत्काल समाधान गर्न ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ । यादवले कार्यकारिणी समितिलाई विस्तार गरी समस्या अझ थप चर्काउन नहुने पक्षमा रहेको उनी निकट नेताको भनाइ छ । पार्टीको एकीकरण प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन ध्यान दिनुपर्नेमा नेताहरुले जोड दिइरहेका छन् । यादवले संघीय परिषद्को अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई बनाउन पहल गरिहेका छन् । एकीकरण प्रक्रियाका बेला भएको समस्या अझ बाँकी छ । ठाकुर पक्षले संघीय परिषद्को अध्यक्ष र कार्यकारी समितिको अध्यक्ष दुवै पद ठाकुरले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको पार्टीका ती नेताले जनाए ।
डा. बाबुराम भट्टराईबाहेक आफ्नो नेतृत्व गर्ने नेता मधेशमा नभएको बुझाइ उपेन्द्र यादवमा रहेकाले समाजवादी पार्टीका नेताहरूले यसमा सहमत हुनेछन् । कुनै बेला आफ्नो नेता रहेका अशोक राईलाई वरिष्ठ नेता बनाएर यादवले पार्टीको नेतृत्व आफूले लिएका थिए ।
पार्टीका नेताहरूका अनुसार ७५ देखि १०० जनासम्मको कार्यकारिणी समिति बनाएर पूर्व राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूको असन्तुष्टि समाधान गर्न सकिने विषयमा छलफल भइरहेको छ । अहिले ५० जनाको कार्यकारिणी समिति रहेकोले १०० पुग्दा अहिलेको दोब्बर हुने उनको भनाइ छ । पार्टी एकीकरण ठीक ढंगले भई महाधिवेशन नभएसम्म यस्ता असन्तुष्टि समाधान गर्न गाह्रो हुने गरेको नेपाली राजनीतिक दलहरूमा उदाहरण छन् ।
अर्कोतर्फ एकीकरण भएको जसपा विभाजन हुन सक्ने संकेत भट्टराई निकट नेता विश्वदीप पाण्डेको टिव्टले राजपाका नेताहरूलाई दिएको छ । विश्वदीप पाण्डेले हालै गरेको ट्विटमा भनेका छन्, ‘मेरो विचारमा एमालेसँग एकता गरेर नेकपासम्म आइपुग्दा प्रचण्डको र नयाँ शक्ति हुँदै जसपासम्म आइपुग्दा बाबुरामको राजनीतिक प्रयोगको रहर पक्कै पूरा भयो होला । अब प्रचण्ड, बाबुरामसहित २०५२ सालपछिका सबै प्रगतिशील शक्तिहरू एक ठाउँमा हुने वातावरण बन्दा नै प्रचण्ड बाबुराम र सँगसँगै देशको पनि हित हुने देख्छु । यो मेरो व्यक्तिगत विचारप्रति समर्थन र विरोध गर्न सबैलाई छुट छ ।’